Izibonelo Zezigelekeqe Zenhloso Yokuphuma Ezizothuthukisa Amazinga Akho Okuguqulwa | Martech Zone
Izibonelo Zezigelekeqe Zenhloso Yokuphuma Ezizothuthukisa Amazinga Akho Okuguqulwa
NgoMsombuluko, Julayi 20, 2020 NgoLwesithathu, ngoMashi 30, 2022 Ugljesa Djuric
Uma uqhuba ibhizinisi, uyazi ukuthi ukuveza izindlela ezintsha neziphumelela kakhulu zokwenza ngcono amazinga wokuguqulwa kungenye yemisebenzi ebaluleke kakhulu.
Mhlawumbe awukuboni ngaleyo ndlela ekuqaleni, kepha ukuphuma kwe-pop-ups kungaba yisixazululo ngqo osifunayo.
Kungani kunjalo futhi kufanele uyisebenzise kanjani kusengaphambili? Uzothola ngomzuzwana.
Yini ama-Pop-up aphuma phambili?
Kunezinhlobo eziningi zamawindi ezivelelayo, kepha lawa amanye asetshenziswe kakhulu:
Ngayinye yazo inezinzuzo zayo, kodwa manje sizochaza ukuthi kungani izigelekeqe zenhloso yokuphuma zinamandla amakhulu ngempela okwenza ibhizinisi lakho libe sezingeni eliphezulu lempumelelo.
Inhloso yokuphuma ama-pop-ups, njengoba igama lisho uqobo, amawindi avela lapho isivakashi sifuna ukuphuma kuwebhusayithi.
Ngaphambi nje kokuba isivakashi sikhombe inkinobho yokuvala ithebhu yesiphequluli noma iwindi, kuvela iwindi le-pop-up lokuphuma. Iveza isithembiso esingenakuvinjelwa esidonsa ukunaka kwesivakashi futhi sisikhuthaze ukuthi sithathe isinyathelo.
Le pop-ups isebenza ngokususelwa kubuchwepheshe be-smart exit-nia obona inhloso yokuphuma futhi obangela ukuphuma.
Futhi kungani zibaluleke kangaka?
Zibalulekile ngoba ungazisebenzisa ukuvimbela ukulahlekelwa umthengi ongase abe khona!
Ngokukhombisa okunikezwayo okubalulekile, abantu bangaqala ukushintsha imiqondo yabo futhi empeleni bafeze umgomo owubekile.
Ukuthi lokho okunikezwayo kumayelana nezindaba ezithakazelisayo abangazithola ngomkhankaso wakho we-imeyili noma isaphulelo sokuthenga ngokushesha, ungazama futhi uqinisekise abantu ukuthi bakwamukele.
Vele kunezinto ezithile okufanele uzisebenzise ezinjengalezi:
Ukunikezwa okubekwe ngobuhlakani
Kubandakanya inkinobho ye-CTA (yokubizela esenzweni)
Lokhu kungabonakala njengezinto eziningi ongacabanga ngazo, kepha sizokukhombisa izindlela ezinhle ezimbalwa okudingeka uzilandele futhi uzisebenzise ngokuhambisana newebhusayithi yakho nebhizinisi lakho lilonke.
Bheka I-Infographic: Iyini Inhloso Yokuphuma?
Imikhuba emihle kakhulu yokuphuma kwezinhloso zokuphuma
Ukuze siqonde kangcono imikhuba yezinhloso zokuphuma, sizozibona ngeso lengqondo sisebenzisa izibonelo ezifanele ezivela kumawebhusayithi ahlukene aphumelele.
Isibonelo 1: Nikeza okuqukethwe okubalulekile
Ukunikeza izingcezu ezibalulekile zokuqukethwe kuhlale kungumqondo omuhle. Lapho wazi iqembu lakho eliqondiwe, ungalungiselela okuqukethwe okukuheha kubo.
Kungaba lula kakhulu kuwe ukuthi udale isithembiso esingenakuvinjwa ngemuva kokuthi ucwaninge kahle izintshisekelo zabantu ofuna ukubaguqulela kubathengi bomkhiqizo noma isevisi yakho.
Uma beshintshana, bangakujabulela ukushiya oxhumana nabo nge-imeyili ngoba "intengo iphansi ngempela".
Ngemuva kokuqoqa oxhumana nabo futhi ubangeze ohlwini lwakho lwamakheli, ungasabalalisa ukuqaphela komkhiqizo futhi uxhumane namakhasimende akho esikhathi esizayo.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi kufanele ufeze okulindelekile, ngaphandle kwalokho, ababhalisile bakho bazogcina bephoxekile futhi ngeke babuye.
Babonise ukuthi ukuthemba wena bekufaneleke ngokuphelele.
Nasi isibonelo kusuka Isheduli:
Okuqukethwe: ICoschedule imisa iwindi lokuphuma lapho izivakashi zingaqoqa khona okuqukethwe okubalulekile. Njengoba sibona, baphinde basho ngokukhalipha ukuthi banikeza kokubili ikhalenda kanye ne-e-book, futhi udinga ukuchofoza ku- Ithole manje inkinobho ukuzamukela.
design: Idizayini elula, kepha enemibala ekhanyayo eheha ukunakwa. Izithombe ezingenhla kombhalo ziwubufakazi bokuthi okuqukethwe kubalindile, okungukuthi, isiqinisekiso sabo.
Kopisha: Ekuxhumaneni bukhoma, Ngaphambi kokuthi uhambe… isunduza impela abantu ukuthi bame bese bejika ngaphambi kokuthi bahambe, futhi lokho kusetshenziswa ngokuhlakanipha nakule pop-up pop-up.
Ukunikezwa: Ukunikezwa kubonakala kukumema. Kubandakanya amagama plan futhi hlela kusiza ukuhlanganisa konke ukunikezwa nokukhiqiza okungcono nokusebenza kwesikhathi.
Isibonelo 2: Nikeza iDemo Ebukhoma
Idemo iyindlela enhle yokuxhumana nezivakashi zakho.
Mhlawumbe ipulatifomu yakho ibonakala iyinkimbinkimbi kakhulu futhi yingakho isivakashi sifuna ukuphuma kuwebhusayithi yakho.
Uma unikeza insizakalo ethile, uzokwazi ukuchaza kalula ukuthi kufanele isetshenziswe kanjani, yiziphi izinzuzo, nokufana okufanayo.
Idemo ebukhoma iyindlela engcono kakhulu ngoba konke kwenzeka ngesikhathi sangempela futhi abathengi abangaba khona bangabona zonke izibuyekezo nezindaba.
Bheka kanjani I-Zendesk basebenzise lokhu ewindini labo lokuphuma lokuhlose ukuphuma:
Okuqukethwe: Njengoba iZendesk iyi-software yamathikithi okusekela amakhasimende, le pop-up iyindlela enhle yokuzibandakanya namakhasimende abo angaba khona futhi uqale ukuxhumana.
design: Into yomuntu ifakiwe, esiza abantu ukuxhumana nebhizinisi lakho.
Ukunikezwa: Idemo ingumnikelo omuhle ngoba leplatifomu ithembisa isixazululo esizokusiza ngokuqhuba ibhizinisi lakho kangcono kakhulu. Futhi, okubaluleke kakhulu, isithembiso sabo siqala ukugcwaliseka ngalo mzuzu, uqala ukuthola usizo ngokushesha.
Kopisha: Le khophi inethoni enenhliziyo efudumele enhle yokwakha ukuxhumana okuqinile namakhasimende. Ngakolunye uhlangothi, uma unamakhasi athile akhona kuyakhiwa, awudingi ukulinda ukuze uwaqede ukuze uqale ukuthola amakhasimende nokuhola kuwo.
Futhi ungabeka izigelekeqe zakho ku- kuyeza maduze amakhasi bese uqala ukubhebhethekisa ifaneli yakho yokuthengisa.
Isibonelo 3: Yisho Ukuhanjiswa Kwamahhala
Ukuhanjiswa kwamahhala kuzwakala njengegama lomlingo lomuntu ofuna ukuthenga kuwe.
Kufanele wazi ukuthi abantu abathandi ukukhokhela noma yiziphi izindleko eziseceleni. Bangavele bakhokhele okuthe xaxa kunokuthi bakhokhele imali ethe xaxa yokuthumela.
Uma ungeke wehlise izindleko zokuthumela, kungcono ukuzifaka ngentengo eyisisekelo kunokukubeka esitolo sakho ngokwehlukana.
Kodwa-ke, uma ukwazi ukunikeza amakhasimende akho ukuhanjiswa kwamahhala, kufanele ukwenze nakanjani. Ukuthengisa kwakho kuzoqala ukwanda ngesikhathi esifushane kakhulu.
Nasi isibonelo kusuka Brooklinen:
Okuqukethwe: I-Brooklinen yinkampani ethengisa amashidi, ngakho-ke akumangazi ukuthi singabona amashidi wokulala ngokunethezeka lapho kuphuma khona izinhloso zokuphuma.
design: Ingemuva elimhlophe, amafonti amnyama. Kepha, ingabe kulula lokho? AmaSpredishithi esithombeni esingemuva nakanjani abukeka kanjalo ngamabomu. Babukeka njengomuntu ovele wavuka embhedeni opholile. Kufana nokuthi bazama ukusiyenga ukuthi sithenge lawa mashidi entofontofo, okulingayo impela, ikakhulukazi uma usuvele wazizwa ukhathele lapho kuvela le pop-up.
Ukunikezwa: Ukunikezwa kucace ngokwanele futhi kusebenza kahle kakhulu.
Kopisha: Awekho amagama angenasidingo, ikhophi elihlanzekile nelicacile.
Isibonelo 4: Shayela abantu ukuthi babhalisele i-newsletter
Iphepha lezindaba luhlobo lokuqukethwe okubalulekile, ikakhulukazi uma wenza okuhle lapho abantu bengaziswa khona ngezinto ezibalulekile futhi bangazizwa sengathi baphoqelelwa ukuthenga okuthile kuwe.
Ikuvumela ukuthi uhlale uxhumekile namakhasimende akho.
Ukuqalisa imikhankaso yezindaba kusho ukuthi kufanele ungaguquguquki ukuze bazi kahle ukuthi bangalindela nini ulwazi olusha oluvela kuwe.
Nansi indlela GQ usebenzise lokhu ku- iwindi pop-up:
Okuqukethwe: I-GQ iwumagazini wabesilisa ohlanganisa indlela yokuphila, imfashini, ukuhamba, nokuningi.
design: Futhi, kufakwe isici somuntu. Ukuhlekisa okuncane esithombeni nokunye okuzivelelayo kuhle kakhulu, okwenza inhlanganisela enkulu.
Ukunikezwa: Banikela ngamathiphu namasu angasiza amadoda ukuthi abukeke emuhle, futhi okuwukuphela kwento okudingeka bayenze ukushiya oxhumana nabo.
Kopisha: Ingxenye ebaluleke kunazo zonke iyagqanyiswa, ngakho-ke izivakashi azidingi ngisho nokufunda noma yini ngaphandle kombhalo obhalwe kufonti enkulu kunazo zonke, njengoba unikeza imininingwane eyanele.
Isibonelo 5: Nikeza isaphulelo
Izaphulelo zihlala zikhuthaza. Uma ubangeza ukuphuma kokuzivelelayo, bangaba nomthelela omkhulu kumholo wakho.
Ukuthi isephulelo sizoba phezulu kangakanani, kuncike kuwe kuphela. Ngisho nokukhuthaza okuncane kungakhulisa kakhulu inani lokuthengisa.
Ezinye izitolo zinikela ngezaphulelo njalo ngoba kuvele kwaba umkhuba onamandla impela.
Ngisho nezingosi ze-e-commerce ezaziwa kakhulu zisebenzisa izaphulelo zenhloso yokuphuma njengendlela yokuheha ukunaka kwezivakashi. Nasi isibonelo esivela kusayithi lapho ungakwazi khona ukuthenga izingubo online, okunikezwayo kuyisaphulelo esingu-15% uma ubhalisela ukumaketha kwabo nge-imeyili.
Okuqukethwe: I-Revolve yiwebhusayithi yezingubo enokhetho olukhulu lwemikhiqizo, ngakho-ke ukunikeza isaphulelo kungakhuthaza abantu ukuthi bathenge okuningi ngenhloso yokonga imali.
design: Siyabona ukuthi ukufaka into yomuntu kungumkhuba ojwayelekile futhi. Le pop-up inesakhiwo esisezingeni eliphezulu esinenkinobho ye-CTA ehlukile.
Ukunikezwa: Banikela ngesaphulelo sika-10% futhi bakusize ukuthi wonge isikhathi esithile ngokukhetha esinye sezigaba ezintathu ezinikezwayo.
Kopisha: Ukukhuluma ngqo kuyindlela enamandla yokuheha ukunaka kwamakhasimende.
Njengoba ukwazi ukubona, kunemibono eminingi yokuthi ungawasebenzisa kanjani ama-pop-ups azuzisayo ukuze uzuze futhi wakhe ukwethembana namakhasimende akho.
Ungadlala ngokwakhiwa, ukopishe, futhi ufake okuhlinzekwayo okuhlukile okuzobamba ukunakekelwa kwezivakashi zakho futhi kukhulise ukuguqulwa kwakho.
Ngempela kuwumzamo omncane ngokuqhathanisa nalokho lolu hlobo lwe-pop-up olungakwenzela ibhizinisi lakho.
Yikholwe noma ungakukholwa, ukuyisebenzisa kungaba lula kakhulu ngoba namuhla kunamathuluzi angakusiza ukuthi wakhe izigelekeqe ezisebenzayo ngaphansi kwemizuzu engu-5.
Kunamathuluzi amaningi anjenge UPrivy nezinye izindlela zakhe lokho kuzokusiza ukuthi wakhe ama-popups wakho wewebhusayithi. Ngokudonsa bese uphonsa umhleli nezinketho zokwenza ngokwezifiso, ama-pop-ups amangalisayo azolungela ukuqaliswa.
Sebenzisa le mikhuba lapho udala izigelekeqe bese ubona ukuthi yikuphi okuguqula okuhle kakhulu kuwe!
Tags: call-to-actionchofoza okuzivelelayoizinga lokuguqulwaukungena okuzivelelayookuzivelelayo kokungenaInhloso yokuphumaphuma ngenhloso pop-upokuzivelelayo okunenhloso yokuphumaukwakheka kwe-pop-uppop-up siphovelaokuzivelelayopheqela pop-uppheqa okuzivelelayoi-pop-up enesikhathiokuzivelelayo okunesikhathi
Ibinzana: Linganisa, Khiqiza, futhi Lungiselela ukukopisha nge-AI